को बन्छ करोडपतिमा गएका भद्रगोलका जिग्री र पाँडेले कति जिते, हेर्नुहोस् रोचक भिडियो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
को बन्छ करोडपतिमा गएका भद्रगोलका जिग्री र पाँडेले कति जिते, हेर्नुहोस् रोचक भिडियो
काठमाडौँ । नायक राजेश हमालले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम 'को बन्छ करोडपति' शनिबार, आइतबार र सोमबार एपीवान एचडीबाट प्रसारण हुन्छ।
कार्यक्रम एसआरबीएन मिडियाको सहप्रायोजन रहेको छ । कार्यक्रममा एसएमएसद्वारा प्रतियोगी छानिने र तीमध्ये १० जना प्रतियोगी फास्टेस्ट फिंगरको लागि चुनिनेछन्। यसरी चुनिएका १० जना कार्यक्रममा सहभागी भएर हट सिटको लागि प्रतिष्पर्धा गर्नेछन्। तीमध्ये छिटो उत्तर मिलाउने एक जना हट सिटमा पुग्नेछन्।
हिजो प्रसारित एपिसोड २९ मा दुई चर्चित प्रतियोगी सहभागी भएका छन्। चर्चित हाँस्य शृखला भद्रगोलका अर्जुन घिमिरे पाँडे र कुमार कट्टेल जिग्री सहभागी भएका हुन्। उनीहरुले करोडपतिबाट जितेको रकम धुर्मुस सुन्तलीले बनाउने घोषणा गरेको गौतमबुद्ध रंगशाला निर्माणका लागि दिने घोषणा गरको छन्।
करोडपतिबाट पाँडे र जिग्रीले कति जिते त हेर्नुहोस् भिडियो :